အိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Winder Safes ကိုကြည့်ပါ။
အတွင်းဘက် LED ပါသည့် Winder Safe Box4Rotor နှင့် လက်ဝတ်ရတနာ Drawer3ခုကို ကြည့်ရှုပါ။
လက်ဗွေနှင့် ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ပါသည့် Winder Safe Box 8 Rotor ကို ကြည့်ရှုပါ။
Microfiber Leather DZ-1700-Foshan Weierxin ဘေးကင်းသော ဇိမ်ခံနာရီ Winder Safes
* ရဟတ်: 12pcs
*လော့ခ်- အီလက်ထရွန်းနစ် ဂဏန်းလော့ခ်
*မီးအဆင့်: 120 မိနစ်
*3ခြမ်းအစိုင်အခဲတုံး၊ ၎င်း၏အချင်းသည် 30 မီလီမီတာဖြစ်သည်။
*လက်ကိုင်- ၃ တုံး
1.Q ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကို ရေရှည်နှင့် ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးဖြစ်အောင် သင်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။
A: 1. ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအကျိုးရှိစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးကောင်းနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်းကို ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ 2. ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်တိုင်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေအဖြစ် ဆက်ဆံပြီး ၎င်းတို့သည် မည်သည့်အရပ်ကပင်ဖြစ်စေ သူတို့နှင့် ရိုးသားစွာ စီးပွားရေးလုပ်ကာ ၎င်းတို့နှင့် မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါသည်။
2.Q ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ သင့်ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကို စမ်းသပ်ပါသလား။
3.Q ထုတ်ကုန်ပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏လိုဂိုကို ပုံနှိပ်နိုင်ပါသလား။
1.ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ISO 9001 နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်။
2.ကျွန်ုပ်တို့ CE, ROSH, FCC အောင်မြင်ပြီးပါပြီ။
4. ကျွန်ုပ်တို့သည် တင်းကျပ်သော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် စံသတ်မှတ်ချက်စည်းမျဉ်းများကို အမြဲလိုက်နာခဲ့ပြီး နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် အချိန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပြီး သင့်အတွက် အမြင့်ဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်များကို ယူဆောင်လာပါသည်။
* ပစ္စည်း: သံမဏိ။အရွယ်အစား- H690*W625*D475mm။* လော့ခ်- အီလက်ထရွန်းနစ်သော့ခတ်။* မော်တော်: ဂျပန်မော်တော်။*4Side Solid steel bolt ၊ အချင်း 30mm ။* လက်ကိုင်: L ပုံသဏ္ဍာန်။* နာရီကို သတ်မှတ်ဦးတည်ချက်တွင် အလိုအလျောက်လှည့်ပြီး ညာဘက်အလှည့်နှင့် အနားယူစက်ဝန်းတွင် တစ်ရက်လျှင် အလှည့်အပြောင်းကို သတ်မှတ်ပါ။* နာရီရွေ့လျားမှုတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဖိစီးမှုကို လျှော့ချရန် အလယ်အလတ်အနားယူစက်ဖြင့် တစ်ရက်လျှင် ချိန်ညှိနိုင်သော Tuns 650 မှ 1950 အထိရှိသည်။* အလိုအလျောက်အချိန်တိုင်းကိရိယာသည် နောက်နေ့တွင် တစ်ချိန်တည်းတွင် သူ့အလိုလိုပွင့်လာမည်ဖြစ်သည်။ လူသားတို့၏ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု မလိုအပ်ပါ။
* ပစ္စည်း- သံမဏိ + မိုက်ခရိုဖိုက်ဘာ သားရေအရွယ်အစား- H200*W420*D360mm* လော့ခ်ချခြင်း- လက်ဗွေ + ထိတွေ့မျက်နှာပြင် ဒစ်ဂျစ်တယ် စကားဝှက်* မော်တော်: ဂျပန်မော်တော်* သံမဏိတုံး ၂ ခု၊ အချင်း 19mm* နာရီကို သတ်မှတ်ဦးတည်ချက်တွင် အလိုအလျောက်လှည့်ပြီး ညာဘက်အလှည့်နှင့် အနားယူစက်ဝန်းတွင် တစ်ရက်လျှင် အလှည့်အပြောင်းကို သတ်မှတ်ပါ။* နာရီရွေ့လျားမှုတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဖိစီးမှုကို လျှော့ချရန် အလယ်အလတ်အနားယူစက်ဖြင့် တစ်ရက်လျှင် ချိန်ညှိနိုင်သော Tuns 650 မှ 1950 အထိရှိသည်။* အလိုအလျောက်အချိန်တိုင်းကိရိယာသည် နောက်နေ့တွင် တစ်ချိန်တည်းတွင် သူ့အလိုလိုပွင့်လာမည်ဖြစ်သည်။ လူသားတို့၏ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု မလိုအပ်ပါ။
* ပစ္စည်း- သံမဏိ + သားရေ*အရွယ်အစား- H1700*W700*D600mm*လော့ခ်- အီလက်ထရွန်းနစ် ဒစ်ဂျစ်တယ်လော့ခ်*မော်တာ- Japanese Mabuchi Motor*4ခြမ်းအစိုင်အခဲတုံး၊ ၎င်း၏အချင်းသည် 30 မီလီမီတာဖြစ်သည်။*လက်ကိုင်- ၃ တုံး* သားရေ- Microfiber သားရေ